ခြင်ဆေးခွေ၊ ဖျန်းဆေး မသုံးဘဲ ခြင်မလာစေချင်ရင် ဒီအပင်လေးတွေ စိုက်ကြည့်ပါ.. - Barnyar Barnyar
May 3, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
ခြင်တွေပြေးအောင် မိမိတို့ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅)ပင်ကို စိုက်ကြည့်ထားလိုက်ပါ… မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေ၊ ခြင်ဖျန်းဆွေးတွေနဲ့ နှိမ်နှင်းနေတုန်းလား?
ဒါက အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အန္တရာယ်များလွန်းလှပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန္တရာယ်မများဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခြင်တွေပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင်ဟာ အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အပင်စိုက်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်၊ ခြင်တွေကိုလည်း သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း နှိမ်နှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်မှာပါ။
ပြီးတော့ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေဟာ မိမိတို့ မီးဖိုခန်းအတွက်လည်း အသုံးဝင်တာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခြင်ပြေးပင်လေးတွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မိမိတို့မီးဖိုခန်းရဲ့ ငွေယိုပေါက်က တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကာကွယ်နည်းလည်း ပဲ ဖြစ်တယ်။
ကန်စွန်းပင်လေးတွေ ပွင့်ချိန်မှာ ခြင်တွေ ပြေးတယ်ဆိုတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကို သင်သိပါသလား? အမှန်ပါ.. ကန်စွန်းရွက်ဆိုတာက မိသားစုတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းလျာဖြစ်ပြီး၊ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ကန်စွန်းပလိန်းတစ်ခွက်ဟာ အလွန်ပဲ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အစားအစာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုးထဲကို သဲ(၁)ဆ၊ မြေဆွေး(၁)ဆ၊ ပြာ (၁)ဆုတ် ရောထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ် လောင်းပေးပါ။ ကန်စွန်းပင်ကို ၃ လက်မလောက်မြှုပ်ပြီး တစ်ပင်စီစိုက်ပါ။ နေရောင်ခြည်ရတဲ့ နေရာမှာထားပြီး ရေလောင်းရန် မမေ့ပါနဲ့။
အသုတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ထည့်စားလို့ရပြီး၊ ငါးပိရည်တို့စရာအဖြစ်လည်း စားလို့ရတဲ့ ပူစီနံအရွက်ကို လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ပူစီနံအပင်လေးတွေက ခြင်တွေပြေးစေတဲ့ အနံ့ကိုထုတ်ပေးတာကြောင့် အိမ်မှာ ပူစီနံပင်လေးတွေ စိုက်ထားရုံနဲ့ ခြင်ပြေးစေတဲ့အပြင် ဈေးဝယ်ခြင်းထဲက ပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်း လျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ပူစီနံအပင်လေးတွေက စိုက်ပျိုးရလွယ်ကူပြီး နေရာမယူတာကြောင့် တိုက်ခန်းနေသူများတောင် စိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်။
ပူစီနံပင်လေးတွေက စိုက်ပျိုးရလွယ်ကူသလောက် အလွန်ပဲ ပွားလွယ်တာကြောင့် ခြံကျယ်ကျယ်မရှိပါက အဝကျယ်တဲ့ အိုးထဲမှာ ထည့်စိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ပူစီနံပင်စိုက်ဖို့ မျိုးပင် သပ်သပ်ဝယ်ဖို့ မလိုဘဲ စားဖို့ဝယ်လာတဲ့ အပင်ထဲက အရိုးရင့်တာလေးတွေကို စိုက်လို့ရပါတယ်။
အိုးထဲကို ရေစီးဆင်းဖို့လွယ်တဲ့ မြေဆီလွှာအပွကို ထည့်ပြီး အခက်အလက်လေးတွေကို လေးဆစ်လောက် မြှုပ်အောင်ထည့်ပြီး အပေါ်ကနေ မြေဆွေး ထပ်ထည့်ပေးရုံပါပဲ။ ရေကိုလည်း အိုးအောက်ခြေထိ စိုတယ်ဆိုရုံလေး လောင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ငါးလေးအိုးကပ်ကို ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ ပင်စိမ်းရွက်လေးအုပ်ပြီး ချက်စားကြပါတယ်။ ထမင်းစားမြိန်စေတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပင်စိမ်း ရွက်လေးတွေကလည်း ခြင်တွေကို ပြေးစေနိုင်တဲ့ အနံ့လေးတွေ ရှိတာမို့ ခြင်ပြေးပင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးထဲက ဝယ်လာတဲ့ ပင်စိမ်းပင်လေးရဲ့ အောက်ခြေကို ဖြတ်ပြီး မြေဆီလွှာထည့်ထားတဲ့ အိုးလေးနဲ့ စိုက်ပျိုးပါ ( မြေသြဇာ အများကြီး ထည့်ဖို့ မလိုပါ)၊
အိုးလေးထဲက မြေဆီလွှာတွေ ခြောက်တဲ့အခါ ရေလောင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပြီး တစ်နေ့ကို ၆ နာရီလောင် နေရောင်ခြည်ရတဲ့ နေရာမှာ ထားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်တိုင်းရဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ ရှိပြီး ဟင်းပွဲတိုင်းမှာ မပါမဖြစ်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူစားခြင်းကြောင်း ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အံ့မခမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအပင်ကို စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြင့်လည်း ခြင်တွေကို အလွယ်တကူ နှိမ်နှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေကြီးအကျယ်မရှိသူတွေက အိုးနဲ့ မြေကြီးအကျယ်ရှိသူတွေကတော့ ဘောင်လေးလုပ်ပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ အိုးထဲကို မြေဆွေးထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူကို အမွှာလေးတွေခွဲပြီး မြေဆွေးထဲ ထိုးစိုက်ထားရုံပါပဲ။
အညှောင့်ထွက်မယ့်အပိုင်းကို အပေါ်မှာထားပြီး စိုက်ပျိုးဖို့ သတိပြုမိပါစေ။ ရေပုံမှန်လောင်းပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်….
မုန့်ဟင်းခါးချက်တဲ့ အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အသားဟင်းတွေချက်တဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမွှေးနံ့သာအနေနဲ့ ထည့်ချက်တဲ့ စပါးလင်ကို လူတိုင်း သိကြပါတယ်။
အိမ်မှာ စပါးလင်ပင် စိုက်ပျိုးထားရုံနဲ့ ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းစရာမလို၊ ခြင်းဆေးဖျန်းစရာမလိုဘဲ ခြင်တွေကို အလွယ်တကူ နှိမ်နှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ပါတယ်။ ဈေးထဲက ဝယ်လာတဲ့ စပါးလင်ပင်ရဲ့ အရင်းပိုင်း (၂ လက်မလောက်)ကို ရေဖန်ခွက်ထဲ ထည့်စိမ်ပါ။
၇ ရက်ကြာပြီးနောက် စပါးလင်ပင်မှ အမြစ်လေးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် မြေဆွေးထည့်ထားတဲ့ အိုးထဲကို ၁ လက်မလောက် မြုပ်အောင် ထိုးစိုက်ပြီး ရေလောင်းပေးပါ။
ဒီနည်းနဲ့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စပါးလင်ပင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါပြီ။
ဒီခြင်ပြေးပင် (၅)မျိုးဟာ အိမ်တိုင်းရဲ့ မီးဖိုခန်းတွေမှာလည်း အသုံးတည့်ပြီး အိမ်မှာမဖြစ်မနေ စိုက်ပျိုးထားရုံနဲ့ ခြင်များပြေးစေနိုင်တဲ့အပြင် အိမ်ရဲ့ မီးဖိုခန်းမှ ငွေယိုပေါက်ကိုလည်း အနည်းငယ်တော့ ပိတ်စို့ပေးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိမိအိမ်မှာ အပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေ စိုက်ပျိုးထားခြင်းကလည်း မိမိရဲ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတို့လည်း ငွေကုန်ကြေးကျမများဘဲ အလွယ်တကူစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေကို အခုပဲ စိုက်ပျိုးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ credit
ခွငျဆေးခှေ၊ ဖနျြးဆေး မသုံးဘဲ ခွငျမလာစခေငျြရငျ ဒီအပငျလေးတှေ စိုကျကွညျ့ပါ..
ခွငျတှပွေေးအောငျ မိမိတို့ရဲ့ အိမျထဲမှာ ဒီအပငျလေး (၅)ပငျကို စိုကျကွညျ့ထားလိုကျပါ… မိမိအိမျမှာရှိတဲ့ သောငျးကနျြးလှနျးတဲ့ ခွငျတှကေို ခွငျဆေးခှေ၊ ခွငျဖနျြးဆှေးတှနေဲ့ နှိမျနှငျးနတေုနျးလား?
ဒါက အလှနျအန်တရာယျမြားတဲ့ နှိမျနှငျးခွငျးဖွဈပွီး ကလေးငယျရှိတဲ့ အိမျတှဆေိုရငျ ပိုပွီးတောငျ အန်တရာယျမြားလှနျးလှပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အန်တရာယျမမြားဘဲ သဘာဝနညျးလမျးတှနေဲ့ ခွငျတှပွေေးစမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သငျဟာ အပငျလေးတှကေို ခဈြမွတျနိုးပွီး အပငျစိုကျတာလညျး ဝါသနာပါတယျ၊ ခွငျတှကေိုလညျး သဘာဝနညျးလမျးအတိုငျး နှိမျနှငျးခငျြတယျဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးတှကေ သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးတှေ ဖွဈမှာပါ။
ပွီးတော့ ခွငျပွေးပငျလေးတှဟော မိမိတို့ မီးဖိုခနျးအတှကျလညျး အသုံးဝငျတာကွောငျ့ တဈခကျြခုတျ နှဈခကျြပွတျ အစီအစဉျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ခွငျပွေးပငျလေးတှကေို စိုကျပြိုးခွငျးဖွငျ့ မိမိတို့မီးဖိုခနျးရဲ့ ငှယေိုပေါကျက တဈဖကျတဈလမျးက ကာကှယျနညျးလညျး ပဲ ဖွဈတယျ။
ကနျစှနျးပငျလေးတှေ ပှငျ့ခြိနျမှာ ခွငျတှေ ပွေးတယျဆိုတဲ့ လြို့ဝှကျခကျြကို သငျသိပါသလား? အမှနျပါ.. ကနျစှနျးရှကျဆိုတာက မိသားစုတိုငျး ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ဟငျးလြာဖွဈပွီး၊ ထမငျးပူပူလေးနဲ့ ကနျစှနျးပလိနျးတဈခှကျဟာ အလှနျပဲ လိုကျဖကျညီတဲ့ အစားအစာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိုးထဲကို သဲ(၁)ဆ၊ မွဆှေေး(၁)ဆ၊ ပွာ (၁)ဆုတျ ရောထညျ့ပွီး ရအေနညျးငယျ လောငျးပေးပါ။ ကနျစှနျးပငျကို ၃ လကျမလောကျမွှုပျပွီး တဈပငျစီစိုကျပါ။ နရေောငျခွညျရတဲ့ နရောမှာထားပွီး ရလေောငျးရနျ မမပေ့ါနဲ့။
အသုတျထဲမှာဖွဈဖွဈ ထညျ့စားလို့ရပွီး၊ ငါးပိရညျတို့စရာအဖွဈလညျး စားလို့ရတဲ့ ပူစီနံအရှကျကို လူတိုငျးသိကွမယျထငျပါတယျ။
ပူစီနံအပငျလေးတှကေ ခွငျတှပွေေးစတေဲ့ အနံ့ကိုထုတျပေးတာကွောငျ့ အိမျမှာ ပူစီနံပငျလေးတှေ စိုကျထားရုံနဲ့ ခွငျပွေးစတေဲ့အပွငျ ဈေးဝယျခွငျးထဲက ပစ်စညျးတဈမြိုးလညျး လြော့စနေိုငျပါတယျ။ ပူစီနံအပငျလေးတှကေ စိုကျပြိုးရလှယျကူပွီး နရောမယူတာကွောငျ့ တိုကျခနျးနသေူမြားတောငျ စိုကျပြိုးလို့ရပါတယျ။
ပူစီနံပငျလေးတှကေ စိုကျပြိုးရလှယျကူသလောကျ အလှနျပဲ ပှားလှယျတာကွောငျ့ ခွံကယျြကယျြမရှိပါက အဝကယျြတဲ့ အိုးထဲမှာ ထညျ့စိုကျဖို့လိုပါတယျ။ ပူစီနံပငျစိုကျဖို့ မြိုးပငျ သပျသပျဝယျဖို့ မလိုဘဲ စားဖို့ဝယျလာတဲ့ အပငျထဲက အရိုးရငျ့တာလေးတှကေို စိုကျလို့ရပါတယျ။
အိုးထဲကို ရစေီးဆငျးဖို့လှယျတဲ့ မွဆေီလှာအပှကို ထညျ့ပွီး အခကျအလကျလေးတှကေို လေးဆဈလောကျ မွှုပျအောငျထညျ့ပွီး အပျေါကနေ မွဆှေေး ထပျထညျ့ပေးရုံပါပဲ။ ရကေိုလညျး အိုးအောကျခွထေိ စိုတယျဆိုရုံလေး လောငျးပေးဖို့ လိုပါတယျ။
ငါးလေးအိုးကပျကို ငရုတျသီးစပျစပျနဲ့ ပငျစိမျးရှကျလေးအုပျပွီး ခကျြစားကွပါတယျ။ ထမငျးစားမွိနျစတေဲ့ ဟငျးတဈခှကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီပငျစိမျး ရှကျလေးတှကေလညျး ခွငျတှကေို ပွေးစနေိုငျတဲ့ အနံ့လေးတှေ ရှိတာမို့ ခွငျပွေးပငျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဈေးထဲက ဝယျလာတဲ့ ပငျစိမျးပငျလေးရဲ့ အောကျခွကေို ဖွတျပွီး မွဆေီလှာထညျ့ထားတဲ့ အိုးလေးနဲ့ စိုကျပြိုးပါ ( မွသွေဇာ အမြားကွီး ထညျ့ဖို့ မလိုပါ)၊
အိုးလေးထဲက မွဆေီလှာတှေ ခွောကျတဲ့အခါ ရလေောငျးပေးဖို့ လိုအပျပွီး တဈနကေို့ ၆ နာရီလောငျ နရေောငျခွညျရတဲ့ နရောမှာ ထားပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အိမျတိုငျးရဲ့ မီးဖိုခနျးမှာ ရှိပွီး ဟငျးပှဲတိုငျးမှာ မပါမဖွဈတဲ့ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူစားခွငျးကွောငျး ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှကေတော့ အံ့မခမျးဖွဈပွီး ၎င်းငျးအပငျကို စိုကျပြိုးထားခွငျးဖွငျ့လညျး ခွငျတှကေို အလှယျတကူ နှိမျနှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
မွကွေီးအကယျြမရှိသူတှကေ အိုးနဲ့ မွကွေီးအကယျြရှိသူတှကေတော့ ဘောငျလေးလုပျပွီး စိုကျပြိုးနိုငျပါတယျ။ အိုးထဲကို မွဆှေေးထညျ့ပွီး ကွကျသှနျဖွူကို အမှာလေးတှခှေဲပွီး မွဆှေေးထဲ ထိုးစိုကျထားရုံပါပဲ။
အညှောငျ့ထှကျမယျ့အပိုငျးကို အပျေါမှာထားပွီး စိုကျပြိုးဖို့ သတိပွုမိပါစေ။ ရပေုံမှနျလောငျးပေးဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့နျော….
မုနျ့ဟငျးခါးခကျြတဲ့ အခါမှာဖွဈဖွဈ၊ အသားဟငျးတှခေကျြတဲ့ အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ အမှေးနံ့သာအနနေဲ့ ထညျ့ခကျြတဲ့ စပါးလငျကို လူတိုငျး သိကွပါတယျ။
အိမျမှာ စပါးလငျပငျ စိုကျပြိုးထားရုံနဲ့ ခွငျဆေးခှေ ထှနျးစရာမလို၊ ခွငျးဆေးဖနျြးစရာမလိုဘဲ ခွငျတှကေို အလှယျတကူ နှိမျနှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
လှယျပါတယျ။ ဈေးထဲက ဝယျလာတဲ့ စပါးလငျပငျရဲ့ အရငျးပိုငျး (၂ လကျမလောကျ)ကို ရဖေနျခှကျထဲ ထညျ့စိမျပါ။
၇ ရကျကွာပွီးနောကျ စပါးလငျပငျမှ အမွဈလေးတှေ ထှကျလာပါလိမျ့မယျ။ ထို့နောကျ မွဆှေေးထညျ့ထားတဲ့ အိုးထဲကို ၁ လကျမလောကျ မွုပျအောငျ ထိုးစိုကျပွီး ရလေောငျးပေးပါ။
ဒီနညျးနဲ့ လှယျကူလငျြမွနျစှာ စပါးလငျပငျ စိုကျပြိုးနိုငျပါပွီ။
ဒီခွငျပွေးပငျ (၅)မြိုးဟာ အိမျတိုငျးရဲ့ မီးဖိုခနျးတှမှောလညျး အသုံးတညျ့ပွီး အိမျမှာမဖွဈမနေ စိုကျပြိုးထားရုံနဲ့ ခွငျမြားပွေးစနေိုငျတဲ့အပွငျ အိမျရဲ့ မီးဖိုခနျးမှ ငှယေိုပေါကျကိုလညျး အနညျးငယျတော့ ပိတျစို့ပေးစနေိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မိမိအိမျမှာ အပငျစိမျးစိမျးလေးတှေ စိုကျပြိုးထားခွငျးကလညျး မိမိရဲ့ စိတျကို လနျးဆနျးစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ စာဖတျသူတို့လညျး ငှကေုနျကွေးကမြမြားဘဲ အလှယျတကူစိုကျပြိုးလို့ရတဲ့ ခွငျပွေးပငျလေးတှကေို အခုပဲ စိုကျပြိုးကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။ credit